Puntland oo diiday in ee ka qeyb gasho Shirka London ka dhacaya iyo Sababaha diidmadaasi keenay oo la ogaaday | Salaan Media
Puntland oo diiday in ee ka qeyb gasho Shirka London ka dhacaya iyo Sababaha diidmadaasi keenay oo la ogaaday
Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntiland ayaa ka biyo diiday ka qeyb galka Shirka Arimaha Soomaaliya looga hadlayo oo dhawaan la filayo in uu ka dhaco Magaalada London ee Dalka Ingiriiska kadib markii ee isku fahmi waayeen ajandayaasha Shirkaasi Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland C/Raxmaan Faroole ayaa soo jeediyay si ay uga qeyb galaan Shirka Arimaha Soomaaliya looga hadlayo ee London ka dhacaya in qodobo dhoor ah ee Puntiland soo jeedisay shirkaasi lagu daro taa uu ka biyo diiday Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wargaliyay Madaxweynaha Puntland C/Raxaan Faroole in ajandayaasha Shirka iyo waxa Soomaaliya ka quseeya ee leedahay Dowlada Soomaaliya ayna yihiin dhamaan wax la diyaariyay Maamulka Faroolana laga doonayo in Shirakaasi ka qeyb galaan kaliya.
Warar Hordhac ah aan helany ayaa sheegaya in Puntland gabi ahaan diiday in ee ka qeybgasho Shirka London ka dhacaya Horaanta Bisha May ee sanadkan kadib markii laga diiday in ajandayaal Puntiland u gaar ah shirkaasi waxyaabha looga hadlayo lagu daro.
Sidoo kale waxyaabaha labada Dhinac isku mari waayeen waxaa kamid ah Arimaha Maamul usamenya Dalka gaar ahaan Maamulka Jubaland State ee hada dhismihiisu kasocdo Magaalada Kismaayo kaa ee Dowlada Soomaaliya ka biyo diiday halka Maamulka Puntlanad dhisidiisa ee kaalin mugle ku leedahay.
Lama oga saameynta uu keeni karo hadii Maamulka Puntland ee ka baaqsato ka qeyb galka shirka Arimaha Soomaaliya looga hadlayo oo la filayo in dhawaan ka dhaco Magaalada London ee Dalka Ingiriiska .